काठमाडौंमा श्रीमान श्रीमती मृत अवस्थामा फेला परे – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/काठमाडौंमा श्रीमान श्रीमती मृत अवस्थामा फेला परे
काठमाडौँ । काठमाडौँमा घरभित्रै नि’स्सासिएर एक दम्पत्तिको मृत्यु भएको छ । शंखरापुर नगरपालिका–३ बोझेनीमा ५२ वर्षीय पदमबहादुर थिङ र उनका श्रीमती ४५ वर्षीया फुलमाया थिङको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दम्पत्ति गएराति आफ्नै घरमा आ’गो बा’लेर सुतेका उनीहरू बिहान मृत भेटिएका थिए । प्रहरीको अनुसार अहिले प्रहरी घटनास्थल पुगेको छ । थिङ दम्पत्तीका छोराले बुवा–आमा अचेत अवस्थामा देखेपछि उनले प्रहरीलाई खबर गरेका हुन् ।
उनीहरू आफू बसेको घरको कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेको र नि’सास्सि’एर मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले जनाएको छ।घटनाबारे अनुसन्धान गर्न महानगरीय प्रहरी प्रभाग साँखु र महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको टोली पुगेको छ। घटनाबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको परिसर प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले बताए।
यस्तै भीआईपीको घरमा निजी सुरक्षाकर्मीका रुपमा परिचालित प्रहरी हवल्दार मृत फेला परेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथन राज्यमन्त्री माया तामाङ बोहराका निजी सुरक्षाकर्मीको रुपमा परिचालित प्रहरी हवल्दार रमेशदत्त जोशी मृत फेला परेका हुन्।
घर बिदामा रहेको जोशी धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ आफ्नै घरस्थित खाटमा घोप्टो परेको अवस्थामा मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । परिवारका अन्य सदस्य घर बाहिर रहेको र फर्किदा जोशी मृत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाबारे अनुसन्धान भईरहेको छ ।
माइलेज बढी दिने सुजुकीको नयाँ सेलेरियो नेपाली बजारमा ! के के छन बिशेषता ? कति पर्छ मूल्य ?